မှုန်မှိုင်းဆိုင်းဆို့ ရီဝေသောလမ်းကလေး……… တစ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » မှုန်မှိုင်းဆိုင်းဆို့ ရီဝေသောလမ်းကလေး……… တစ်
မှုန်မှိုင်းဆိုင်းဆို့ ရီဝေသောလမ်းကလေး……… တစ်
Posted by ကိုေပါက္(မႏၱေလး) on Jul 14, 2012 in Local Guides, Photography, Travel | 27 comments
1 မိုးရိပ်တွေကြောင့် မိူင်းမူံနေတဲ့တောင်တန်း…………..
4 တောင်စဉ်တောင်တန်းတွေမမြင်ရလောက်အောင် မိုးသားတွေနဲ့အုံ့ဆိုင်း
5 တိမ်ခိုးတွေကြောင့် မူံရီမိူင်းနေတဲ့တောင်တန်းတွေ
12 မိုးငွေ့တွေကြားက တဲကလေး
12 အဝေးကတောင်တန်းတွေမှာ မိုးတိမ်ခိုးတွေ………………..
ဒီပုံလေးတွေကတော့ မူဆယ်ကနေမန္တလေးအပြန်လမ်းမှကားပေါ်ကနေတွေ့ခဲ့ရတဲ့ မိုးတိမ်ခိုးတွေဆိုင်းနေတဲ့မြင်ကွင်းလေးပါဘဲ.
ဒီနေ့လည်း မှုံမှုန်းနေတာဘဲ လေးပေါက်
ငိုချင်သလိုလို လွမ်းသလိုလို ဆွေးသလိုလို
အခုချိန်ချဉ်ငပ်စပ် ခရုချဉ်စပ် ဂဏန်းချဉ်စပ်လေး စားလိုက်ရရင်
လာသွားကြစို့ ………… ပြောနေရင်ကြာတယ် လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖေါ်လိုက်
ဖရဲမ ပျောက်ချက်ကောင်းနေတယ် မောင်ရင်တို ့မရှိရင်မပြည် ့စုံဘူးဟေ့ပြန်လာခဲ ့ဦး
မိုးတွေအုံ ့နေတဲ ့မြင်ကွင်းတွေကလွမ်းစရာတွေသယ်လာတတ်တယ်နော်
မိုးတွေရွာရင်ပျော်တာ အခုထိပါပဲ ခုလိုမိုးတွင်းမှာအောက်ပြည်ကရှုခင်းတွေကို
ရေတွေဖွေးနေတဲ ့လယ်ကွင်းပြင်တွေနဲ့ရိုးတိုးရိတ်တိတ်မြင်ရတဲ့တောင်တန်းကြီင်္းတွေနောက်ခံနဲ ့ပေါ ့
“ပြာရီမှိုင်းကာ မို့မို့ ညို့ညို့ ညိုလွင်
ညှင်း လေပြေ သွေးလို့သာ ဖေးမကူချင်”
ဒီသီချင်း လေးကို အမှတ်ရမိပါတယ်
၁၃နဲ့ လွမ်းရကောင်းမလား စဉ်းစားရင်း
သုံးပုံစလုံး ဆွဲယူကူးပြီး လွမ်းသွားပါတယ်။ မှုံမှိုင်းအုံ့ဆိုင်းသွားပါတယ်။
မိုးတွေအုံ့နေချိန် ကိုပေါက် ပုံတွေကြည့်မိတော့
ကြည့်ရတာ အမြင်တစ်မျိုး ဆန်းသဗျ..အုပေါက်ရ
ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မိုက်ပါတယ်….ဒါပေမဲ့ စာရေးသားတဲ့နေရာမှာအထူးဂရုပြုရမှာကတော့.စာလုံးပေါင်းပါပဲ (မူူံမှိုင်းဆိုင်းဆို့ ရီဝေသောလမ်းကလေး……… တစ်)မှာ..မှုံကစာလုံးပေါင်းလေးမှားနေပါတယ်…တကယ်ဆို ဒီ (မှုန်) နဲ့ သာမှုန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်…နည်းနည်းဂရုစိုက်ပါ…
ကျနော်သတိမထားမိလို့ မူံနဲ့မှုန်မှားသွားတာ အနူူးအညွတ်ကိုတောင်းပန်ပါတယ်။
နောင်ဆိုရင် (နည်းနည်းဂရုစိုက်ပါ…)ဆိုတာလေးကို အမြဲတမ်းအများကြီးဂရုစိုက်နေပါမယ်ခင်ဗျာ။.
မူံနဲ့မှုန်အသုံးအနုံးကွားခြားချက်ကလေးပါ ပြောပေးမယ်ဆိုရင် အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်မိသလို
ဟုတ်တယ်ဗျ မြန်မာပြည်က သတ်ပုံနားလည်တဲ့သူအရမ်းနည်းသွားပြီ။
လေးပေါက်ရေ…………… လွမ်းစရာလည်းဘာမှမရှိပေမယ့် လေးပေါက်ရဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ပြီး လွမ်းနေမိတယ်။ ဝမ်းနည်းလာတယ်။ ပုံလေးတွေကိုလည်း ကူးသွားတယ်နော်။
ငြိမ်းလည်းပုံလေးတွေတင်ပါလား မကူးနဲ့ ကိုယ်ရိုက်တဲ့ပုံလေးတွေ ရှိရင် လည်းတင်ပါလား ငြိမ်း ။။။ လေးလေးပေါက် ပုံလေး တွေကို ကြည့်ပြီး လူကို ကွေးချင်တဲ့စိတ်တောင် ပေါက် တယ် စိတ်ကူးနဲ့လေငယ်ငယ်က မိုးကြိုးပစ်သံလေး ကြားတာနဲ့ စောင်ခြုံပြီးကွေးမယ်ဘဲ ကြံမိတယ် ခုအသက်ရွယ်လည်းနည်းနည်းရလာရော မိုးရွာရင် ကွေးဖို့နေနေသာသာ အလုပ်ပိတ်ရက်မရလို့ အလုပ်မှာ ဘဲ မိုးအေးလေးနဲ့ အတူ အလုပ်လုပ်လိုက် အိမ်ပြန်ရောက်မှ မိုးရာသီ အရသာကိုခံစားရတယ် ညပိုင်း မိုးရွာတာကို ပိုကြိုက်တယ် မိုးရာသီ ကိုအရမ်းကြိုက်တယ် မိုးရာသီက လူကိုပျင်းစေတာတော့ အမှန်ဘဲ
ဒါပေမယ့် မိုးရာသီတာပြောတာ ခုရာသီတွေကမမှန်ဘူးနော် မိုးရွာနေရင်းနဲ့ကိုပူနေတာ မိုးရသာကို သေချာတောင်မခံစားရပါဘူးပူစပ်ပူလောင် ကြီးဖြစ်နေတယ် မိုးရာသီကလေ။ လေးလေးပေါက်ပုံလေးတွေ အားပေးသွားတယ် နော် ။ရွာသူရွာသားအပေါင်းကို ခင်မင်လျှက် စနိုး။။။
ပုံ -၉ လေးကိုကြည့်ပြီး အမှန်ကိုလွမ်းရပါတယ်လေးပေါက်ရယ်(ဘာကိုလွမ်းရမှန်း မသိတာကလွဲလို့)။
လေးပေါက်ရေ..ပုံတွေကြည့်ပြီး တကယ်ကိုလွမ်းမိတယ်။ အဲဒီလို ရှုခင်းတွေကို မခံစားရတာကြာပေါ့။
အပြင်မှာသာဆိုရင် လွမ်းလွန်းလို့ မျက်ရည်ကျမိမလားပဲ။
သစ်ခြောက်ပင်နဲ့ တဲအိမ်လေးကို ကြိုက်ပါတယ်။
မှုံ ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို သတ်ပုံမှာ မတွေ့မိပါဘူး။ မှုန် ပဲ ရှိပါတယ်။ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုမရှိခြင်း ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ သုံးပါတယ်။
-ှုံ ကို လှုံ့ဆော် ဆိုတဲ့ တစ်လုံးကလွဲလို့ တစ်ခြားသော သရတွေမှာ မတွေ့မိပါဘူး။ အက္ခရာစဉ်စီရင် -ှုံ ကို -ှုန် အနေနဲ့ မှတ်ယူပြီး နငယ်သတ် နေရာမှာ စီပါတယ်။
အဓိကအချက်က ညမှာပိုစ်တင်တာများတော့ ဆိုင်မီးကမှောင်နေတာရယ်
ကျနော်အလုပ်လုပ်ရင်ဖြစ်စေ ပုံတင်ရင်ဖြစ်စေ နည်းနည်းမဟုတ်ပါဘူး။
လေးပေါက်ရဲ့ စေတနာတွေ၊ အလုပ်အပေါ်တာဝန်ယူမှုတွေ၊ ဂရုစိုက်မှုတွေကို လေးပေါက်စာတွေကို ဖတ်တာနဲ့ သိသာပါတယ်။
ကော်နက်ရှင်ကို အန်တုပြီး တင်ရတဲ့နေရာမှာ အမှတ်တမဲ့ဖြစ်သွားတာကိုလည်း နားလည်ပါတယ်။
အမှားတွေ့တာနဲ့ ချက်ချင်းပြန်ပြင်တာကိုလည်း လေးစားပါတယ်။
အမှန်အတိုင်းပြောရင် မှုံ နဲ့ မှုန် ကွာခြားချက်ကို အခုမှ သေသေချာချာ လေ့လာဖြစ်သွားတာပါ။ သိသလိုလို နဲ့ မသိတဲ့အတွက် သတ်ပုံကျမ်းကို ပြန်ကြည့်ခဲ့ရပါတယ်။
ဘယ်လို လက်စွမ်းနဲ ့ရိုက်လိုက်တာလဲ…ဗျာ..လို့။
တောင်ခိုးတွေအုံ ့ဆိုင်းလို ့လှချက်ဗျာ ကိုပေါက်ရေ။
ကံမကောင်းတဲ့ ရွှေမင်းသားနဲ့ အပြိုင်ပါပဲလား……. [:))]
အဲဒီနေ့က မှတ်မှတ်ရရ 10-6-2012 နေ့ အပြန်လမ်းတစ်လမ်းလုံးမိုးရွာလို်က်တိတ်လိုက်။.
ဒါကြောင့်လဲ မိူင်းမူန်မူန် တဲ့ပုံတွေရလာခဲ့တာပါ
ဒါမျိုး view ကိုမြင်ရင် အိမ်ဝေးနေသူက home sick ရတယ်
အိမ်မှာ နေသူက လည်း အိမ်မှာနေပြီး ဘယ်လွမ်းလို့ လွမ်းမှန်းမသိ ဖြစ်ရတယ် ။